यस्तो छ तपाईको आज (असोज ९ गते) को राशिफल
छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ । अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। अप्ठ्यारो स्थितिबाट बच्न परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला । समयको मागअनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ । बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। नियमित काम भने सम्पादन हुनेछ ।
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश काममा समस्या पर्नेछ । आफ्ना लागि छुट्याइएको वस्तु समेत उपभोग गर्न बाधा पर्नेछ । बेसुरको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ । आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ । काम बनाउन दोहोर्याएर प्रयास गर्नुपर्ला । तापनि मिहिनेत गर्दा स्थितिमा सुधार आउनेछ । आफ्नो सूचना बाहिरिन सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन ्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल(अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ ।
अस्वस्थताले काममा खट्न समस्या पर्नेछ। कमजोरीले चिन्ता बढाउनेछ भने परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला । आफ्ना विषयमा अरूले दाबी गर्न सक्छन् । लगनशीलताले मात्र संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ । प्रयत्न गर्दा समाजसेवामूलक काम गर्न सकिनेछ । व्यवसाय तथा आम्दानी हुने काममा भने अलमल हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने चिताएको नतिजा प्राप्त नहुनाले आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्न सक्छ । गोपनीयता बाहिरिनाले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। तापनि मिहिनेत गर्दा केही काम बन्नेछन् । तत्काल उपलब्धि प्राप्त नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ । रोकिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला । पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
वि.सं. २०७६ असोज ९ बिहीबार (इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर २६)